MyanPay verifies the user’s personal information, proof of identity, email address, phone number, contact address and business verification to be sure that the user is the owner of MynaPay account for payment.
In every payment process with MyanPay, no one will never know your Financial Information like Bank Account numbers, Credit/Debit card.
MyanPay proceeds with exact policies to be secure your personal data privacy.
MyanPay saves users’ personal information and financial information by data Encryption with highest technologies.
Automated GeoIP Tracking
MyanPay involves automatically recording users’ location and automatically re-checking process.
This process prevents signing from abnormal palces into MyanPay users’ accounts.
(For Example – You are normal user in Myanmar and if someone login from abnormal palces (Eg-Russia) inashort time, MyanPay will immediately perform the required protection process to your MyanPay Account.)
MyanPay watches all financial processes and gives the best protection by rechecking and taking actions immediately if any suspect process occurs.
MyanPay will never ask for your financial information not only via email but also via phone.
MyanPay users need to contact MyanPay if any suspect facts occur.
MyanPay protects not to happen the unnecessary frauds and loss for users with exact policies.
MyanPay solves the problems between the sellers and buyers until they satisfy without losing if any other dispute cases occur such as the lack of delivery products, the product delivered is wrong, not giving services as they advertise for Online E-commerce.
MyanPay will always stand for the right buyers or sellers.
If dispute cases occur, you need to contact to MyanPay as fast as possible.
MyanPay always guarantees with Buyer Protection Policies to be able to buy reliably, not to occur mistakes, unnecessary loss and frauds.
MyanPay always guarantees with Seller Protection Policies to save time, money and not to occur the unwanted loss by checking the transactions and buyer informations.
MyanPay includes the monitoring of MyanPay users’ payment transactions automatically and if unreliable and suspect payment transaction and transfers occur, it provides the rechecking processes for users’ safety.
For Example- if unreliable and suspect payment transaction and transfers occur, MyanPay holds the payment transaction forawhile and confirms after checking accurately.
GeoTrust Extended Validation (EV) SSL Encryption
While customers use MyanPay, it encrypts the data with GeoTrust Extended Validation (EV) SSL Encryption (Green Bar SSL) not to interrupt between Web Browser and MyanPay Server.
2-Step verification (two-factor authentication) for extra account security
MyanPay continues other processes after confirming by sending One-Time Password (OTP) as verification code to email or mobile SMS to be sure the customer for the important processes such as logging in to MyanPay account, sending money, requesting money, preparing the related setting with MyanPay account and E-commerce System in Merchant Websites.
Many Others Security Functions
Customers can use reliably for includingalot of essential security systems in MyanPay.
အသုံးပြုသူသည် Account ပိုင်ရှင်ဖြစ်မဖြစ် သေချာမှုရှိစေရန် အသုံးပြုသူ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် ၊ မှတ်ပုံတင် အမှတ် ၊ အီးမေးလိပ်စာ ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၊ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သက်သေခံလက်မှတ် များကို သေချာစွာ စစ်ဆေးထားပါသည်။
MyanPay အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေမှုတိုင်းတွင် လူကြီးမင်း၏ Bank Account နံပါတ်များ၊ Credit/ Debit Card အချက်အလက်များ စသည့် Financial Information များကို အခြားမည်သူတဦးယောက်ကိုမှ ပေါက်ကြားစေမည် မဟုတ်ပါ။
MyanPay သည် လူကြီးမင်း၏ Personal Data များအား လုံခြုံမှု ရှိစေရန် တိကျသော Policy များဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
MyanPay သည် အသုံးပြုသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား နည်းပညာဖြင့် Data Encryption (ဝှက်စာ) ပြုလုပ်၍ သိမ်းဆည်း ထားပါသည်။
MyanPay သည် အသုံးပြုသူများ၏ အသုံးပြုနေသာ တည်နေရာအား အလိုအလျောက် မှတ်သားခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်အား ထည့်သွင်းထားပါ သည်။
( ဥပမာ - လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ပုံမှန် Myanmar နိုင်ငံအတွင်း အသုံးပြုနေသူဖြစ်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်ေ သာ နေရာဒေသ (Eg-Russia) မှ အချိန်တိုအတွင်း Login ၀င်ရောက်ခြင်းများ ရှိလာပါက လူကြီးမင်း၏ MyanPay Account အား လိုအပ်သော ကာကွယ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအား ချက်ချင်း လုပ်ဆောင်ပေးသော ဆောင်ရွက်ချက် ဖြစ်ပါသည်။ )
MyanPay သည် ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ အားလုံးအား စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပြီး သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်များ ရှိလာပါက ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး ချက်ချင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။
MyanPay သည် လူကြီးမင်း၏ Financial Information များကို Email ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Phone ဖြင့်သော်လည်ကောင်း မည်သည့်အခါမှ မေးမြန်းတောင်းယူလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
MyanPay အသုံးပြုသူများသည် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသော အကြောင်းအရာများအား တွေ့ရှိပါက MyanPay အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
MyanPay သည် အသုံးပြုသူများအတွက် မလိုလားအပ်သော လိမ်ညာမှုများနှင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမူ များ မဖြစ်ပေါ်စေရန် တိကျသော Policy များဖြင့် ကာကွယ်မှုပေးထားပါသည်။
MyanPay သည် Online ပေါ်တွင် ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် ပြုလုပ်ခြင်း (Online E-commerce) လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကုန်ပစ္စည်း မပေးပို့ ခြင်း ၊ ပေးပို့ လာသော ကုန်ပစ္စည်းမှာ မှန်ကန်မှု မရှိခြင်း ၊ ကြိုတင်အသိပေး ကြေငြာထားသည့်အတိုင်း ဝန်ဆောင်မှုမရရှိခြင်း စသည့် အငြင်းပွားမှု တစုံတရာ ဖြစ်ပွားပါက ပြေလည်မှု ရရှိသည်အထိ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နစ်နာမှု မရှိစေရန် ကြားဝင် ဖြေရှင်းပေးပါသည်။
MyanPay သည် မှန်ကန်သော Buyer (သို့မဟုတ်) Seller အတွက် အမြဲ ရပ်တည် ဖြေရှင်းပေး သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အငြင်းပွားဖွယ်ရာ Dispute Case များ ဖြစ်ပွားလာပါက MyanPay အား အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေးရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
MyanPay သည် Online E-commerce လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဈေးဝယ်သူ (Buyer) များအတွက် ယြုံ ကည်စိတ်ချစွာ ဈေးဝယ်ယူနိုင်ရန်၊ အမှားအယွင်းမဖြစ်စေရန်၊ မလိုလားအပ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု၊ လိမ်ညာမှုများ မဖြစ်စေရန် Buyer Protection Policy များဖြင့် အမြဲ စောင့်ကြည့် ကာကွယ်မှု ပေးနေပါသည်။
ထို့အတူ Online မှတဆင့် ဈေးရောင်းသူ (Seller) များအတွက် အချိန်နှင့် ငွေကို ချွေတာနိုင်ရန်နှင့် မလိုလားအပ်သော ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန် ငွေပေးချေမှု (Transaction) များနှင့် ၀ယ်ယူသူ (Buyer) များ၏ အချက်အလက်များအား အမြဲစစ်ဆေး အတည်ပြုပေးလျက် ရှိပြီး Seller Protection Policy များဖြင့် ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။
MyanPay အသုံးပြုသူများ၏ ငွေပေးချေမှု မှတ်တမ်းများအား အလိုအလျောက် စောင့်ကြည့်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်အား ထည့်သွင်းထားပြီး မယုံကြည်ရသော၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသော ငွေပေးချေ မှု၊ ငွေလွှဲပြောင်းမှုများ ရှိလာပါက ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် အသုံးပြုသူများ၏ လုံခြုမှုအတွက် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
( ဥပမာ - MyanPay သည် မယုံကြည်ရသော၊ စိတ်မချရသော ငွေပေးချေမှုများ ရှိလာပါက Payment Transacton အား ခေတ္တ Hold လုပ်ထားပြီး သေချာစွာ စစ်ဆေး၍ အတည်ပြုပြီးမှသာ Conﬁrm ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ )
MyanPay အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အသုံးပြုသူ၏ Web Browser နှင့် MyanPay Server တို့အကြား ကြားဝင်နှောင့်ယှက်မှု မရှိစေရန် GeoTrust Extended Validation(EV) SSL Encryption (Green Bar SSL) နည်းပညာဖြင့် ကာကွယ်ထားပါသည်။
MyanPay သည် အသုံးပြုသူ၏ MyanPay Account အတွင်းသို့ Login ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ငွေပေး ပို့ခြင်း (Send Money)၊ ငွေတောင်းခံလွှဲ ပေးပို့ခြင်း(Request Money)၊ MyanPay Account အတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ Profile Setting အချက်အလက်များ ပြုပြင်ခြင်း စသည့် အရေးကြီးသော လုပ်င န်းစဉ်များနှင့် Merchant Website များတွင် ငွေပေးချေခြင်း (E-commerce System) လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် ကိုယ်တိုင် ငွေပေးချေသူအဖြစ် သေချာမှုရှိစေရန် One-Time Password (OTP) အား Email (သို့မဟုတ်) Mobile SMS ဖြင့် Verification Code ပေးပို့၍ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးမှသာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်စေပါသည်။
MyanPay စနစ်တွင် အသုံးပြုသူများအတွက် အခြားလိုအပ်သည့် များစွာသော လုံခြုံရေးစနစ်များ ထည့်သွင်းပါရှိသည့်အတွက် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။